शि,लाजित : के यसले यौ, न क्षमता ब,ढाउँछ ? – Jagaran Nepal
शि,लाजित : के यसले यौ, न क्षमता ब,ढाउँछ ?
जब आयुर्वेदिक चिकित्साको कुरा आउँछ, सबैको दिमागमा जडीबुटीको स्मरण हुन्छ । मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि पहाडमा पाइने बिरुवाबाट उपचार सम्भव छ ।
त्यसैगरी जब यो आयुर्वेदिक विधिको माध्यमबाट यौन स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा आउँछ, त्यसमा सबैभन्दा अघि आउँछ शिलाजित र अश्वगन्धा ।
धेरै मानिसहरु शिलाजित र अश्वगन्धालाई यौन स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सहयोगीको रुपमा मान्छन् । जबकि यो यौन स्वास्थ्यको लागि मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । कतिपयले शिलाजितलाई यौन स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । शिलाजित शताब्दीयौंदेखि मानव स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
शिलाजित के हो?
संस्कृतमा शिलाजित शब्दको अर्थ पर्वतको मणि भन्ने हुन्छ । यसलाई शक्तिशाली खनिज पदार्थको रुपमा चिनिन्छ ।
शिलाजित पत्थरबाट उत्पन्न भएको खनिज पदार्थ हो । घाम लागेर भएको प्रचण्ड गर्मीका कारण पहाडको धातुकाे भाग पग्लिएर पहाडबाट बाहिर निस्किएको पदार्थ नै शिलाजित हो ।
त्यो तरल शिलाजित सुकेपछि चम्किलो ढुंगा जस्तै देखिन्छ । यही पदार्थ मान्छेको प्रजनन क्षमता बढाउन उपयोगी मानिन्छ ।
शिलाजितका अन्य कामहरु
दिमागी कार्यको बढावा दिन सहयोगी
शिलाजितमा पाइने कैयौं पदार्थले दिमागको प्रणाली सुधारको लागि सहयोग गर्ने गर्छ । कतिपयले यसलाई अल्जाइमर थेरापीमा पनि सहायक रहेको मान्छन् ।
इन्टरनेशनल जर्नल अफ अल्जाइमर डिजिजको एक अध्ययनमा भनिएको छ कि शिलाजितको उपयोग उमेर बढ्ने प्रक्रियालाई कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।
फुल्विक एसिड शिलाजितको प्रमुख यौगिक हो, जसले रगत शुद्ध गर्न सहयोग गर्छ ।
कलेजोको क्यान्सर रोक्न
शिलाजितको उपभोगले क्यान्सर कोषसँग लड्न पनि मद्दत गर्छ । एक अनुसन्धानले पत्ता लगाए अनुसार शिलाजितले कलेजोको क्यान्सरमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
शिलाजितले क्यान्सर कोषिकाहरुको वृद्धि रोक्छ र उनीहरुलाई नष्ट पनि गर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले शिलाजितमा क्यान्सर प्रतिरोधी पदार्थ भेटिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ ।
मुटुलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि
शिलाजित डाइट्री सप्लिमेन्ट हो । यसको सेवन गर्दा मुटु तन्दुरुस्त हुन्छ । शोधकर्ताहरुले प्रयोगशालामा मुसाको मुटुको अवस्थाको परीक्षण गरेका थिए । त्यहाँ आइसोप्रोटेरिनलको साथमा इन्जेक्सन समेत लगाइएको थियो । यसमा शिलाजितको प्रोएक्टिभ इफेक्ट पनि देखिएको थियो ।
मोटोपना कम गर्नको लागि
अतिरिक्त तौलका कारण मानिसको शरीरमा रहेका मांसपेशीहरु थकित हुन्छन् । जसले हड्डीहरुमा समेत समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् । जर्नल अफ मेडिसिनल फूडले गरेको एक अध्ययन अनुसार मोटोपना भएका मान्छेलाई एउटा शुद्ध शिलाजितको साथमा खानेकुरा दिइयो । जसले उनीहरुलाई अध्यासको क्रममा धेरै तागत आयो । यसरी शिलाजितको प्रयोगले शरीरको तौल कम गराउन मद्दत गर्छ ।
थकान कम गर्न
एथ्नोग्राफी जर्नलमा प्रकाशित २०१२ को एक अध्ययन अनुसार शिलाजितको प्रयोगले थकान जस्ता मानसिक कमजोरीको अवस्था कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने पुष्टि भएको थियो ।
अध्ययनबाट यो पनि पुष्टि भएको छ कि शिलाजितको उपभोगले शरीरमा हुने विभिन्न कोषिकाले राम्रो काम गर्न मद्दत गर्छ । यसले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ र थकान कम गर्छ ।